China Vacuum Blood Collection Tube Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | IVEN
Tsipika fanangonana fantsom-bokatra ra
Ny tsipika famokarana fantsom-dra dia misy ny fantson'ny fantsom-batana, ny doka simika, ny fanamainana, ny fijanonana ary ny fantsom-batana, ny fantsom-bokatra, ny fantsom-bokatra, sns. Raha ampitahaina amin'ny mpanamboatra hafa, ny fitaovantsika dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa, ao anatin'izany ny habeny ankapobeny, ny automatique ambony & ny fitoniana, ny tahan'ny lesoka ambany sy ny vidin'ny fikolokoloana, sns.
Ho an'ny famokarana fantsom-bokatra fanangonana rà banga na tsy banga.
Fametahana Tube sy fanontana an-tserasera
Ampiasao ny sensor Algerie Leuze GS photoelectric, motera servo United States AB ho an'ny fifehezana ny fandefasana marika, motera JSCC ary ny fiara hafainganam-pandeha mifanaraka amin'ny familiana sy fanindriana marika lehibe.
Afaka miaraka fanontana an-tserasera rafitra ho an'ny kaody batch ary fanontana daty.
Ny masinina iray dia mety ho an'ny 8mm / 13mm / 16m.
Fifandraisana an-tserasera miaraka amin'ny tsipika famokarana.
Fampidirana Tube sy famaritana
Teknolojia famoahana fantsona mandeha ho azy, fametrahana ny fantsom-pohy ao anaty clamp miaraka amina detector fa tsy misy fantsona na fantsom-pifamadihana. Ny milina dia mihatra amin'ny karazana fantsona misy marika ary mamaha ny lesoka amin'ny marika avoaka tapaka amin'ny milina fantsom-bozaka nentim-paharazana
avy amin'ny mpanamboatra hafa.
Ampiasao amin'ny rafitra doka 3, araka ny fangatahan'ny famokarana fantsom-bokatra ra.
Paompy USA FMI, famafazana doka
Doka fampiakarana paompy syringe
Paompy syringe mameno ny doka
Ny masinina dia misy fiasan'ny fikarakarana satroka mandeha ho azy, famahanana satroka, satroka amin'ny mason-toerana, fametahana kapila. Ao anatin'ny fantsona dia hamokatra tsindry ratsy iray avy hatrany, avy eo ampidiro ao anaty lovia ny fantsona.
Fanakanana & fanaovana vakansy & famoahana ny tray
Misy rafitra fanamainana 4 seta, mampiasa PTC fanafanana, tsy misy loto ao anaty fantsona, ary achineve fahombiazan'ny fanamainana. Manana fitaovana fametrahana tsara ho an'ny tsorakazo mafana sy fantsona izy.
Ny tombam-bidy famokarana fantsom-bokatra IVEN
1.High fahaizana 15000-18000pcs / ora
2.H automation avo lenta, fizotran'ny fandidiana mety sy fanatsarana ny fampidirana, mpandraharaha mahay 2-3 dia afaka mitantana tsara ny tsipika famokarana iray manontolo manomboka amin'ny fantsom-bokatra hatramin'ny famokarana vokatra vita
3.Mifanaraka amin'ny fantsom-panangonana rà mandriaka sy tsy misy fantsom-batana ary afaka ampanjifaina manokana ho an'ny zarazaraina ho an'ny mpanjifa amin'ny andalana iray.
5.Blood fanangonana fantsom-pamokarana tsipika feno dia manana fifehezana kalitao. Famaritana amina lafiny maro, toy ny fantsom-panavotana, fantsona tsy hita, fatra, mari-pana fanamainana, satroka amin'ny toerany, fametahana fantsom-bozaka sns. Miantoka ny taha avo lenta
6. Rafitra fandefasana telo. Doka marina, rafitra fametrahana doka 3 izay afaka mahafeno ny fepetra famokarana fanampiny / reagents.
7.Ny teknolojia fampidirana lozam-pifamoivoizana mandroso. Teknolojia vaovao miaraka amin'ny asan'ny interlaced loading sy ny elanelam-potoana fanitsiana mandeha ho azy. Ampiharina amin'ny karazany roa amin'ny lozabe mifangaro mahitsizoro sy mifangaro.
8. Taham-pahamendrehana avo lenta. Miaraka amin'ny famolavolana rakotra fantsom-boaloboka tsy manam-paharoa. Ny diplaoma banga dia azo apetraka amin'ny efijery mora sy marina, ny diplaoma fantsom-pahalalana mifandraika amin'izany dia azo apetraka ho azy araka ny haavon'ny faritry ny mpampiasa.
Structure avo lenta 9.High Quality: Ny vatan'ny tena dia mitazona vy avo lenta ho an'ny fitondrana lanjany, ny amboniny ary ny endriny dia mampiasa ny vy tsy misy fangarony avo lenta ho an'ny fanadiovana mora kokoa. Mihaona amin'ny fenitra GMP
Haben'ny Tube azo ampiharina Φ13 * 75 / 100mm; Φ16 * 100mm
Haingam-pandeha 15000-18000pcs / ora
Fomba fanodinana dosis sy fahamarinana Anticoagulant: 5 doka nozzles fantsom-pandrefesana FMI, fandeferana amin'ny fahadisoana ± 5% mifototra amin'ny 20μLCoagulant: fantsom-panafody 5 fampidiran-tsiranoka marina paompy, fandeferana amin'ny fahadisoana ± 6% mifototra amin'ny 20μLSodium Citrate: fantsom-panafody 5 miorim-paka, fandeferana amin'ny fahadisoana ± 5% mifototra amin'ny 100μL
Fomba fanamainana Fanamafisana PTC miaraka amin'ny mpankafy tosidra.
Famaritana cap Karazana midina na karazana ambony miakatra arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Fitaovana sombin-javatra azo ampiharina Karazan-tsakafo mifangaro karazana na mahitsizoro.
Fibodoana habakabaka 6300 * 1200 (+1200) * 2000 mm (L * W * H)
Previous: Masinina fanangonana syringe
Manaraka: Vialan'ny famokarana ranon-javatra Vial